First Yr. Geography Syllabus existence of Rohingya: တက္က သိုလ် ပထမနှစ် ပ ထ ဝီ ဝင် ဘာ သာ ရပ် တွင် “ရိုဟင်ဂျာ” အ ကြောင်း သင် ရိုး တွင် ပြ ဌာန်း ထား ခြင်း | Danya Wadi
»မှတ်စု»First Yr. Geography Syllabus existence of Rohingya: တက္က သိုလ် ပထမနှစ် ပ ထ ဝီ ဝင် ဘာ သာ ရပ် တွင် “ရိုဟင်ဂျာ” အ ကြောင်း သင် ရိုး တွင် ပြ ဌာန်း ထား ခြင်း
Posted by danyawadi on December 9, 2013 in မှတ်စု, သမိုင်း, အထူးကဏ္ဍ, အထောက်ထားများ, ဆောင်းပါးများ, Photos
ရခိုင်စစ်တကောင်းလူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။ထိုလူမျိုးများ သည်။ ရှေး ပဝေ သဏီ ကပင် နေထိုင်ခဲ့ကြ
သော တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများ ဖြစ်ကြသည် ဟု Page No. (94) တွင် အောက်ပါအတိုင်း အင်္ဂ လိပ်
လို ရေးသား ထားသည်ကို ဘာသာ ပြန်ခြင်းဖြစ် သည်။
Page No. (94)
First year Geography Syllabus existence of Rohingyas: အဝေးသင် တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် ပထ၀ီ ဘာသာရပ်တွင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးအကြောင်းဖေါ်ပြပါရှိခြင်း၊
ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေရှ် နယ်စပ်အနီး၊ ဘူးသီးတောင် နှင့် မောင်တော မြို့ နယ်များတွင် ရိုဟင်ဂျာ နှင့် ၊ရခိုင်စစ်တကောင်း လူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။ ထို လူမျိုးများ သည်။ ရှေးနှစ်ပေါင်း များစွာက တည်းက နေထိုင်ခဲ့ကြသော တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများ ဖြစ်ကြသည် ဟု အောက်ပါအတိုင်း အင်္ဂလိပ်လို ရေးသား ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
………….. In northern Rakhine State close the boder with the Bangladesh at Butheetaung and Maundaw township are where the Rohinggas and chittagarean live.There minority ethnic groups had settled in the boder region since early day.
First Yr. Geography Syllabus existence of Rohingya : ပထမနှစ် ပ ထ ဝီ ဝင် ဘာ သာ ရပ် တွင် “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုပြီး သင် ရိုး တွင် ပြဌာန်းထား သည် ကို အံ့ဩ ဖွယ် တွေ့ရှိ ရပြီး ၎င်း စာအုပ်ကို ၂၀၁၂ ခု ဇူလိုင်လ (၂၅) ရက်စွဲ ဟုဖေါ်ပြထားကြောင်း၊ စာအုပ်တွင် Dr.Than Than Htay , Professor , Head of department , Yangon University of Distance Education ဟုဖေါ်ပြထားသည် ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။
ပထမနှစ်ပထဝီဝင် ဘာသာရပ်တွင် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုပြီးဤသို့ ပြဌာန်းထား သည် ကို၊အံ့ဩဖွယ် ရာ တွေ့ ခဲ့ရ လေသတည်း။
…..Chapter 4.1 acient culture…..Cultural base………you can see……..
နိူင်ငံတော်သမ္မတ ကိုယ်တိုင် မရှိပါဘူးလို့ တရားဝင်ပြောထားသည်ကိုတက္ကသိုလ်အဆင့်မှာ ယခု ကဲ့သို့ပြဌာန်းထားခြင်း မှာ နိူင် ငံတော် ၏ဩဇာအာဏာနှင့် အချုပ် အခြာအာဏာကို ထိခိုက်စေ ပါ သည်။မမှားသောရှေ့နေမ. သေသောဆေးသမားဟူ၍မရှိဟုဆိုရိုးစကား ရှိပါ သည်။ အမှား သိလျင် အမှန်ကိုလျင်မြန် စွာပြင်နိူင်ခြင်း သည်ပင် လျင် ပညာတတ်တို့၏စွမ်းပကားပင် မဟုတ်ပါလား။ အမှိုက် ကစပြဿဒ် မီးလောင် ဆိုသလို မဖြစ်စေလိုပါ။မြင်းခွာက လေးတစ်ဖက် ချွတ်ချော် မှုကြောင့် စစ်ပွဲ အလီလီင်္င်္အောင် ပွဲဆင်ခဲ့သော နပိုလီယံ၏ ကျရှုံး ခဏ်းမျိုးလုံးဝ အဖြစ်ခံ၍ မရပါ။ကြားသိ မြင် မိလျင် မည်သို့တုံ့ပြန်ပြုပြင် ရမည်ကို စဉ်းစားနိူင်ကြ စေရန်ရည် ရွယ်ပါသည်။
← ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း၊ အိမ် ထောင် စု မေး ခွန်း ပုံ စံ
Monastery or Arsenal: Weapons in Rakhine Buddhist Monasteries in Arakan →
2 comments on “First Yr. Geography Syllabus existence of Rohingya: တက္က သိုလ် ပထမနှစ် ပ ထ ဝီ ဝင် ဘာ သာ ရပ် တွင် “ရိုဟင်ဂျာ” အ ကြောင်း သင် ရိုး တွင် ပြ ဌာန်း ထား ခြင်း”
ရိုဟင်ဂျာ Rohingya လူမျိုးစုအကြောင်း အထက် တန်း ပထ၀ီဝင် နှင့် တက္ကသိုလ် ကျောင်း သုံး စာ အုပ် တွင် ပြ� February 26, 2014 at 6:29 pm	Reply
[…] First Yr. Geography Syllabus existence of Rohingya: တ က္က သိုလ် ပထမနှစ်… […]
Danyawadi popular post ၊ လူကြိုက် အများဆုံးခေါင်းစဉ်များ…. | Danya Wadi April 28, 2014 at 2:00 am	Reply
[…] First Yr. Geography Syllabus existence of Rohingya: တက္က သိုလ် ပထမနှစ် … […]